Shiinaha Medical qalliinka PE saarayaasha cajalad hufan oo neefsada iyo alaab-qeybiyeyaasha | ORIENT
1. Cajalad xariir ah waxay leedahay faa iidooyinka jilicsanaanta iyo raaxada, isku dheganaanta maqaarka iyo jeexitaan fudud;
2. Cajalad aan-tolmo lahayn (warqad) ah oo la neefsan karo ayaa leh xoog siigalinta oo ma fududa in la jabiyo;
3. Dahaarka polyetylen (PE) ee daloolka leh, oo si fudud loo dillaaci karo, si fududna loo jeexjeexi karo, khadadka la jeexjeexo oo aan qalloocin;
Waxyaabaha 100% Cudbi
Madhalays ka dhigida Aaladda
Cabir: 1.25 * 910cm
Nolosha shelf 3 sano
Waa maxay cajaladda ciyaaraha fudud?
Qalabka aasaasiga ah ee cajaladda xabagta ayaa ah dhar caafimaad oo aan tolmo lahayn, warqad caafimaad, maro cudbi laastik ah, maro cudbi ah oo cad, maro xariir ah, daloolin filimka PE iyo filimka OPP siday u kala horreeyaan oo ay ku dahaadhan yihiin cufnaanta kulul ee dhalaalka kululaynta xasaasiga ah ama isku-darka isku-darka acrylic. Waxaa badanaa loo isticmaalaa hagaajinta tuubbooyinka faleebada ama cirbadaha iyo hagaajinta faashad marka dhaymo nabarrada. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa hagaajinta balastarro kala duwan.
4. Cirridka xasaasiga ah ee acrylic-ga ee sida gaarka ah loo diyaariyey waxay leedahay dhejis adag, isku dhejis wanaagsan oo bilow ah, xajisid xajis iyo isku dhejis culus, oo aan lahayn geesaha qalloocan, xoqin, diirnaan khafiif ah oo siman, iyo maqaar jeexid la'aan;
5. Tilmaamo-bixinno badan si loo daboolo baahiyaha caafimaad ee kala duwan.
Hore: Nebulizer kombaresarada leh CE ISO iyo FDA
Xiga: QALBIGA INSULIN